MUQDISHO, Somalia - Sirdoonka Mareykanka ayaa soo bandhigay warbixin cusub oo uu kaga hadlay fashilka dowladda Faderaalka Somalia ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Warbixintan oo ka kooban 42 bog, islamarkana la daabacay January 29 ayaa la sheegay in Al-Shabaab wali sii wadi doonto khatarta ay ku hayso dalalka Geeska Africa, sababo la xiriira guul-darrada dagaalka lagula jiro Kooxdan.
Taliyeyaasha hay'adaha kala duwan Sirdoonka Mareykanka [CIA-da, FBI-da iyo NSA] ayaa diyaariyay warbixintan oo daboolka ka qaadey in saddex qodob ay keeneen in Al-Shabaab looga adkaan waayo dagaalka.
Sababaha fashilka keenay:
1 - Tartanka Siyaasiyiinta Soomaalida
2 - Musuq-maasuqa
3 - Wada-shaqeyn la'aanta hay'adaha amniga
Warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in Ciidamada AMISOM oo ka kooban 21,000 oo Askari, kuwaasoo ay ku jiraan 4,000 oo Kenyan ah aysan awoodin inay Al-Shabaab ka saaraan guud ahaan Somalia, kahor inta aysan kasoo bixin dalka 2021.
Fashilkan lasoo bandhigay ayaa ka dhigaysa Al-Shabaab koox khatarteeda soo xoogeysanayso, oo adoow u leh wali inay weeraro xoog leh ka fuliso gudaha Somalia iyo Kenya.
Iydoo difaacaysa danaheeda gobolka iyo amniga muwaadiniinteeda, dowladda Mareykanka ayaa duqeymo joogto ah ku haysa goobaha ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab, si uu u wiiqo awoodda Kooxdan ku abaabuleyso weerarada.
Tan iyo markii la doortay Madaxweyne Farmaajo, waxaa ka dhacay Somalia weeraro taariikhda baal-madow ka galay, oo shacab badan lagu laayey, kuwaasoo uu kamid yahay qaraxii Zoobe, 14-kii October 2017, kaasoo lagu dilay ku dhawaan 1,000 qof.